Urhulumente wase-UK: Inqanaba lezoyikiso zobugrogrisi 'libukhali' ngoku
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba eziHlumayo zase-UK » Urhulumente wase-UK: Inqanaba lezoyikiso zobugrogrisi 'libukhali' ngoku
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • ulwaphulo-mthetho • Iindaba zikaRhulumente • iindaba • abantu • Safety • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba eziHlumayo zase-UK
Urhulumente wase-UK: Inqanaba lokugrogrisa ngoku 'libukhali'
Isigqibo sikarhulumente wase-UK sokunyusa umgangatho wobugrogrisi ibiyimpendulo kwibhombu yemoto yaseLiverpool ngeCawa, apho amapolisa abhengeze uhlaselo lwabanqolobi.
I-UK yayisele inyuse inqanaba layo lokoyikisa ukuba 'libi' ngoNovemba ka-2020 emva kohlaselo lwaseYurophu.
Inqanaba lobugrogrisi lase-UK lathotywa laya kutsho 'kuninzi' ngoFebruwari kulandela 'ukuncipha okubalulekileyo' kwiziganeko.
Ukunyuka kwangoku kumlinganiselo wokulumkisa kwakungenxa yeyelenqe lebhombu ibe sisiganeko sesibini kwinyanga.
Emva kokuba iNkulumbuso u-Boris Johnson ekhokele intlanganiso ye-Ofisi yeKhabhinethi engxamisekileyo ye-Ofisi yeKhabhinethi (COBR) intlanganiso yokucinga, urhulumente wase-Bhritane ubhengeze ukuba ukutyunjwa kwenqanaba lobugrogrisi kwelizwe kuye kwaphakanyiswa ukuba 'kubi.'
Inqanaba 'elibi' lithetha ukuba olunye uhlaselo lubonwa 'njengolunokwenzeka kakhulu.'
Isigqibo, esaqinisekiswa ngu Unobhala weKhaya uPriti Patel, yathathwa i-Joint Terrorism Analysis Centre (JTAC) - iqela leengcali ezichasene nabanqolobi ezivela kwimibutho yokuthotyelwa komthetho kunye nee-arhente zokhuseleko ezisekelwe kwikomkhulu le-MI5 yaseLondon.
UPatel uthe ukunyuka komgangatho wokulumkisa kungenxa yeyelenqe lebhombu "yeyesibini kwinyanga." Kusenokwenzeka ukuba wayebhekisa ekubulaweni ngemela kwelungu lePalamente yaseTory uDavid Amess kwinyanga ephelileyo, ebikhe yabizwa ngokuba luhlaselo lobunqolobi ngamapolisa.
“Kukho uphando olwenziwayo ngoku; bazakufuna ixesha, indawo, ukwenza umsebenzi abawenzayo malunga nokuphanda esi sehlo,” utshilo uPatel, esongeza ukuba urhulumente “uyaqinisekisa ukuba sithatha onke amanyathelo afunekayo.”
I-UK yayisele inyuse inqanaba layo lokoyikisa ukuba 'libi' ngoNovemba ka-2020 emva kohlaselo lwaseYurophu. Yehliswa yaya kutsho 'enkulu' ngoFebruwari kulandela 'ukuncipha okukhulu' kweziganeko. Inqanaba 'elibukhali' linqanaba lesibini eliphezulu kakhulu lokulumkisa, kwaye kubekwe kuphela 'okubalulekileyo' ngaphezulu kwalo.
Amapolisa abambe abantu abane malunga noqhushumbo lwangeCawe, apho umkhweli weteksi wadubula isixhobo esiqhushumba ngaphandle. Liverpool Isibhedlele sabasetyhini. Umqhushumbisi yayikuphela kwento efileyo.